Muxuu salka ku hayaa khilaafka hoggaanka Taalibaan?
Khilaaf u dhaxeeya qunyar socodka iyo xagjiriinta hoggaanka Taalibaan ayaa sii xoogeystay tan iyo markii kooxda ay ku dhowaaqday xukuumad ku-meel gaar ah toddobaadkii tegay, waxaa sidaas AP u sheegay laba shaqsi oo Afghani ah oo xog ogaal u ah loolankan awoodeed.
Khilaafkan ayaa waxaa ku lug leh Mullah Abdul Ghani Baradar, oo ah wada-xaajoodihii Taalibaan ee wada-hadalladii lala galay Mareykanka iyo mid ka mid ah aas-aasayaasheeda.
Kadib markii Taalibaan ay dhiseen xukuumadda ku-meel garaka, ayaa waxaa iska horimaad uu ka dhacay madaxtooyada Kabul, waxaana jiray warar sheegayey in Baradar la dilay, inkasta oo markii dambe la beeniyey.
Baradar ayaa ahaa sarkaalka ugu sarreeya Taalibaan ee sheegay suurta-galnimada ah inay dhisayaan dowlad loo dhan yahay, hase yeeshee himilooyinkaas ayaa waxaa laalay xubnaha mayalka adag ee kooxda kadib markii toddobaadkii tegay lagu dhawaaqay dowlad Taalibaan kaliya ah.
Astaan kale oo muujineysa in loolanka ay ku adkaanayaan garabka mayalka adag, calanka cad ee Taalibaan ayaa laga taagay madaxtooyada ayada oo meesha laga saaray kii qaranka Afghanistan.
Sarkaal ka tirsan Taalibaan ayaa sheegay in hoggaanka uusan weli go’aan ka gaarin calanka la qaadanayo, balse ay u badan tahay in labada calan la is dhinac taagi doono.
Labada il-wareed ee la hadlay AP ayaa sheegay in mid ka mid ah golaha wasiirada cusub uu diiday xilkiisa, kadib markii uu ka carrooday dowladda Taalibaan kaliya ah ee albaabka ka xiratay qowmiyadaha iyo diimaha laga tirada badan yahay.
Afhayeenka Taalibaan, Zabihullah Mujahid ayaa beeniyey inuu khilaaf jiro. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibedda Taalibaan, Amir Khan Mutaqi ayaa warbixinadaas ugu yeeray “dacaayad.”
Baradar ayaa dhowaanahan ka maqnaa shaqooyin muhiim ah. Tusaale, ma uusan joogin madaxtooyada markii toddobaadkan lagu soo dhoweeyey ra’iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibedda Qatar Sheikh Mohammad bin Abdur Rahman Al-Thani.
Hase yeeshee, Arbacadii ayuu Baradar wareysi uu bixiyey ku sheegay inuusan ka qeyb-gelin kulankaas, sababo la xiriira inuu ka maqnaa Kabul.
Si kastaba, fallanqeeyayaasha siyaasadeed ayaa rumeysan in khilaafkan uusan wax halis ah ku keeni doonin Taalibaan.